Latest Update | Mustaqbal Radio
Home - Author Archives: Latest Update
Author Archives: Latest Update
Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar), ayaa maanta shir-gudoomiyay kulan ay Muqdisho ku yeesheen Guddiga Qaran ee Gurmadka Fatahaadaha iyo Beesha caalamka kaas oo looga hadlay sidii loo dar-dar gelin lahaa howlaha gurmadka ee lagu badbaadinayo dadka ay saameeyeen fatahaaduhu. Kulanka waxaa goob joog ka ahaa wasiirka arimaha gudaha oo xubin ka ah guddiga qaran ...
Wasiirka AMniga Somaliya, Taliyayaasha Ciidamada iyo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa kulan degdeg ah Galabta ka yeeshay Saameynta roobkii Xalay soo bilowday ee wali ka da’aya qeybo Kamid ah Magaalada Muqdisho. Roobka ayaa saameeyay Nolosha dadka ku dhaqan Magaalada Muqdisho, si gaar ah Dadka danyarta ah ee ku nool guryaha Bacaha iyo Cowshadaha ka sameysan, Waxaana jira dhimahso ka dhalatay Roobka ...
Kooxda Villarreal ayaa waxa ay bar baro 2-2 ah lagashay dhigeed Real Maadrid, kulanka ayaa ahaa midka ugu dambeeyay xilli ciyaareedkan 2018/17ay dheelaan labada koxood-ba. Qeebtii hore ee ciyaarta waxaa la wareegtay kooxda Real Madrid waxaana goolasha ukala dhaiyay Baledaqiiqadii 11naad halka goolka labaad daqiiqadii 38aad ay ka heshay Ronaldo .sidaas ayaana lagu kala nastay. Balse markii la’isku soo laabtay ...
Ganacsade lagu dilay Degmada Waaberi ee Magaalada Muqdisho.
Warar Dheeraad ah ayaa ka soo baxay Dil Caawa ka dhacay degmada Waaberi ee Gobolka Banaadir kaa soo loo geystay Nin Ganacsade ahaa. Dilka ayaa ka dhacay Nawaaxiga Isgoyska Dabka ee Magaalada Muqdisho oo kamid ah meelaha ay Dowladda Ciidamada badan soo dhoobtay, Kooxo Bistoolado ku hubeysan ayaa Toogtay Nin Magaciisa lagu soo Koobay Ow Aadan kaa soo ahaa Sarifle ...
Sarkaal katirsan Bangraft oo lagu dilay Qarax ka dhacay Wadajir.
Faahfahino dheeraad ah waxey ka soo Baxeysaa Qarax xoogan oo Galabta laga maqlay Xaafado badan oo kamid ah Degmada Wadajir ee Galbeedka Magaalada Muqdisho. Qaraxa oo ahaa Nooca Somalida ay utaqaano Dhajiska ayaa Gaarigiisa loogu xiray Sarkaal sare oo katirsan Ciidanka uu Mareykanka Tababaro ee Loo yaqaano Bangraft, Xaafada loo yaqaano Tarabuush ayuu si gaar ah Qaraxa uga dhacay. Sarkaalka ...
Yariisoow oo Gobolka Banaadir usoo Magacaabay 4 Agaasime Guud.
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir, ahna Duqa Magaalada Muqdisho ayaa magacaabau 4 Agaasime Guud oo ka hoos shaqeyn doono Gudoomiye Kuxigeenada Maamulka Gobolka Banaadir. Wareegto ka soo Baxday Injineer C/Raxmaan Cumar Cismaan (Yariisoow), ayaa lagu sheegay in Magacaabista agaasimayaashan ay tahay mid ku cusub Dowladda Hoose, oo aan Jirin tan iyo Burburkii Dowladdii Dhexe, horay waxaa loo yaqiinay Agaasime Waaxeedyo balse majirin ...
Puntland oo Somaliland ku eedeysay in ay Gabbaad iyo Agab siiso Daacish iyo Al-Shabaab.
War Saxaafadeed ka soo Baxay Madaxtooyada Puntland ayaa lagu sheegay in Somaliland ay Gabaad iyo Agab siiso Kooxaha Daacish iyo Al-Shabaab oo dagaal adag ay kula Jirto Puntland. Qoraalka ka soo baxay Puntland ayaa sidoo kale lagu sheegay in Somaliland ay Taageero Muuqata siiso Kooxaha ka dagaalamaya Buuraha Galgala ee Gobolka Bari, Halkaas oo dhowr jeer laga soo qaaday Weeraro ...
Gianluigi Buffon oo hishiis hor dhac ah lagaaray kooxdan.
Goolhayaha Juventus Gianluigi Buffon ayaa lagu soo waramayaa inuu qandaraas laba sano ah u saxiixayo kooxda Paris Saint-Germain. Ka dib 17 sano oo uu joogay kooxda Juventus , Buffon ayaa ka tagaya Juventus xagaagan, waxaana uu u muuqdaa in 40 jirkaan uu ku biro kooxda PSG Sida laga soo xigtay Totosports, PSG ayaa ka mid ah kooxaha xiiseynaya, waxaana ay ...
Iker Casillas oo qalinka ugu duugay heshiis cusub kooxdiisa Porto.
Goolhaye Iker Casillas ayaa go’aansaday inuu qandaraas cusub oo 12 bilood ah u saxiixo Porto. Casillas ayaa waqti ka baxsan line-upka ku soo qaatay, waxaana ay keentay in 36 jirkaan lala xiriiriyo inuu u wareegayo Premier League. Si kastaba ha ahaatee, ka dib markii lagu soo celiyay kooxda qeybtii labaad ee xilli ciyaareedka, halyeeygii reer Spain ayaa fursad u helay ...
Manchester City oo udhaqaaqday saxiixa xiddig garabka uga ciyaara Chelsea.
Kooxda Manchester City ayaa lagu soo waramayaa inay u dhaqaaqeyso xiddiga garabka uga ciyaara Chelsea Eden Hazard suuqa kala iibsiga xagaaga. Hazard ayaa lixdii xilli ciyaareed ee ugu danbeysay ku qaatay kooxda ka dhisan London, isagoo kula guuleystay labo horyaal oo Premier League ah isagoo dhaliyey 88 gool 299 kulan tartamada oo dhan. Si kastaba ha ahaatee, iyadoo Chelsea ay ...
Real Madrid oo xiiseyneysa daafac Bayer Munich u ciyaara.
David Alaba aabihiis iyo wakiilkiisa George Alaba ayaa xaqiijiyay in xiddiga Bayern Munich uu bartilmaameed u yahay kooxda heysata horyaalka yurub ee Real Madrid. Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Austria, ayaa loo isticmaalay dhowr jeer difaac iyo qadka dhexe intii lagu jiray siddeeddii sano ee uu ku sugnaa Bayern, waxaana dhawaan lala xiriiriyay Madrid iyo Barcelona. Xagaaga ayaa laga yaaba ...
UEFA oo ku dhawaaqday Kooxda ugu fiican Europa League-ga 2017/18.
Xiriirka Kubadda Cagta Qaaradda Yurub ee magacooda loo soo gaabiyo UEFA ayaa soo saaray kooxdii ugu ficaneyd Tartankii Europa League ee dhawaan lasoo gabagabeeyay. Kooxda ku guuleysatay ee Atletico Madrid ayaa ku leh xiddigaha ugu badan iyada oo ku leh 6 xiddig maadama ay tahay kooxda ku guulaystay tartanka xilli ciyaareedkan. Kooxda Marseille oo ah kooxda kaalinta 2-aad gashay ayaa ...